आधा सिलिन्डर भरेको ग्यास मात्र पाइने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १३ चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३३ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । अब सिलिण्डर आधा मात्र भरेको ग्यास पाइने भएको छ । नेपाल आयल निगमले सिलिन्डर आधा मात्र भनेर बजारमा पठाउन ग्यास उद्योगहरुलाई निर्देशन दिएको हो । हाल एक सिलिन्डरमा १४.२ केजी ग्यास हुन्छ । तर अब सिलिन्डरमा ७.१ केजी मात्रै ग्यास हुनेछ ।
निगमका एक अधिकारीकाअनुसार मागअनुसार ग्यास पुर्‍याउन नसकिने अवस्था आएपछि आधा सिलिण्डर ग्यास बेच्ने निर्णय भएको हो । आयल निगमले बुधबार राति नै सिलिन्डरमा आधा परिमाण मात्रै ग्यास भर्न निर्देशन दिएको एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले पुष्टि गरे ।
२०७२मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाकन्दीमा पनि आधा मात्रै सिलिन्डर भरेर वितरण गरिएको थियो ।
अहिले कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण ग्यासको माग उच्च छ । तर बजारमा आपूर्ति निकै कमजोर छ, कालोबजारी मौलएको छ । सुरुमा ग्यास आपूर्ति भएको तर उपभोत्ताले धेरै सञ्चय गरेको तर्क गर्दै आएको सरकारले लकडाउन सुरु भइसकेपछि भने आधा सिलिण्डर गर्ने नीति लिएको छ ।
सबैलाई ग्यास उपलब्ध गराउन आधा सिलिण्डर मात्र भरेर बेच्न लागिएको सरकारको तर्क छ ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, हामीले आधा भर्न सुरु गरिसकेको छैनौं । सरकारबाट थप निर्देशन कुरिरहका छौं ।’
दोस्रो विवाह गर्दै रीमा विश्वकर्मा !
काठमाडाैं । चर्चित नायिका रीमा विश्वकर्मा अर्को विवाह गर्ने तयारीमा जुटेकी छिन् । शनिबार प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको…
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः हल्ला बढी, तयारी कम
काठमाडौं । जनप्रतिनिधिविहीन रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउने चर्चा चलेअनुरुप प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको छैन ।…
साउन १ गतेदेखि देशभरिका महानगर र उपमहानगरका सवारीसाधनमा हरियो स्टिकर अनिवार्य
काठमाडौं । तपार्इंले हरियो स्टिकर आफ्ना सवारीसाधनमा राख्नुभएको छ रु यदि छैन भने तपाईंले हरियो स्टिकर अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्ने…
नयाँ दिल्ली । सुरुमा ऊ कोठीमा कहिलेकाहीँ मात्रै आउँथ्यो । कहिले मेरो साथमा त कहिले अरू कुनै केटीको साथमा…
भ्रष्टविज्ञ अझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, मेलम्ची कहिले आउँछ ‘मेरो सरकार’ ?
काठमाडौं । २०७६ साल दशैँमा काठमाडौंका जनतालाई मेलम्चीको पानी खुवाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्ष अगाडि जाहेर…
संसदमा महन्थ ठाकुरले शपथ गराउने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा पद…
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ 32 views